Fotoana fandefasana: 11-25-2020
Ny AGR Garlic Farm, nalaza tamin'ny tolo-kevitr'ireo tian'ireo mpanjifa eo an-toerana, dia namboly tongolo lay an-tanety nandritra ny taona maro. Ny orinasa mpijinja dia mamorona vokatra voapoizina tongolo gasy maro manomboka amin'ny tongolo gasy vaovao ka hatramin'ny vovoka tongolo lay. AGR Garlic Specialist, manager Wendy Chen, dia faly fa ny G ...Hamaky bebe kokoa »
Ny iray amin'ireo ampahany mahafa-po kokoa amin'ny asako amin'ny maha-mpihaino tsara dia ireo zavatra kely nozarainao tamiko, na lovia vita an-trano io, vaovao momba ny firenenao, sarin'ireo vokatra fambolena nambolenao tany amin'ny tany, na tsara indrindra. rehetra, mahita ny vokatra nojinjainay nandritra ny taona maro ...Hamaky bebe kokoa »
Vokatra vaovao maro amin'ity herinandro ity, izay mety ho vaovao aminao ny maro aminy, ka hevitra kely angamba no ho hevitra tsara: ny paoma mena dia manana nofo matsiro marefo, mampahatsiahy ahy ny paoma masaka tsara indrindra nohaninao ny tsiro. miaraka amina savony maple fotsiny. Paoma Fuji, antsoina koa hoe mena a ...Hamaky bebe kokoa »